WAXAAN U RAJAYNAYAA ILHAAN OMAR IN FURSADA UGA FAA IIDAYSO LABA DEEDA DAL SOMALIYA IYO AMERICA - Latest News Updates
WAXAAN U RAJAYNAYAA ILHAAN OMAR IN FURSADA UGA FAA IIDAYSO LABA DEEDA DAL SOMALIYA IYO AMERICA
Waa gabadh yaroo ka soo jeeda geeska afrika una dhaltay Soomaaliya. Sanadihii sagaashameeyadii bilawgeedii oo ahaa xili dalka soomaaliya uu galay qalalaaso siyaasadeed iyo dagaalo sokeeye oo ay sababtay burburkii dawladnimo ee dhacay xiligaas ayaa Ilhaan waxay ahayd dadkii hayaanka ku tagay cariga maraykanka.
Halkaa oo ay ku iloowday,dhibkii faraha badnaa ee dalkeeda ka dhacay,kuna bilawday nolol cusub iyo la qabsasho dad iyo dal inta badan aysan wadaagin af iyo diin iyo dhaqanba.Waxay noqotay Ilhaan qof la soo baxday haybadii ku duugnayd iyo hibadii eebbe siiyay, duba waxay heer ka gaartay aqoonta heer jaamacadeed,waxayna ugudubtay codkarnimo iyo raganimadii hibada ay u lahayd. waxay soo guclaysaba Ilhaan waxay gaartay in ay door muuqda ka qaadato siyaasada dalka Maraykanka.
Waxaa cajab noqtay in ay noqoto gabadhii muslimada ahayd ee ku guulaysata kongareeska ee muslim ah iyo dhanka kale oo ah gabadhii u horaysay ee soomaaliyeed ee heerkaa iyo halkaa gaarta. ma qariibsanaayo in Ilhaan ka noqoto mustaqbalka dhaw madaxweyne Maraykanka oo ay noqoto inta mar xirata gabadhii u horaysay ee dalkaa ka noqota madaxweyne oo jabisa rikoodhkaas aan cidi hore u gaarin.
Ilhaan raganimaa ku dhan,waana bashar illaahay siiyay karti iyo maskax taqaan dulqaad iyo maamul ahna hogaamiye dhab ah oo loobogay. dadka guulaysta oo hanka sare yeesha waxaa ku diirsada kuna dayda oo raali ka noqda nafkastoo caqli u saaxiib ah oo jecel hormarka iyo ilbaxnimada. waan ku faraxsanahay faraska ay heen saysatay gabadhaa soomaaliyeed iyo heerka ay u cirbinayso. sida madaxweeynaheena muxamed bin cabdullahi farmaajo uu dalkeenii iyo magaceenii soomaaliyeed sare uugu qaaday oo u bilay ayay Ilhaana sare u qaaday magaceenii soomaaliyeed marka la eego dadyawga isugu tagay america ee wada leh maanta dhexdooda.
Anigu intaa ayaa doc ii tuurta oo aan la rayn raynayaa! ee ma ihi sidii xunkii eebbe dalka dhaafshay ee xasan sheekh iyo xertiisii dalkoodii soor dhaafsaday ah calooshii la cayaar. waxa ideeqaa waa dadkayga soomaaliyeed iyo dalkayga oo leh magac iyo xasilooni dawladnimo nidaam iyo kala danbayn tanoo keenaysa in dadka soomaaliyeed ku noolaadaan nolol xurmo leh. kolkaa Gabantan yaroo ilhaan siday magacaygii soomaalinimo kor uugu qaaday amerika dhexdeeda oo ay uuga guulaysatay loolankii adkaa ayaa i ah sharaf weyn. waana ku faanaynaa gabadheena ilhaan illaahay hanoo xafido.
Gogoldhig dabadeed hadaan u soo gudbo dulucda maqaalkan kooban, Waan leeyahay Adeer markii illaahay kusiiyo fursad wuxuu eegaa sidaad uuga faa iidaysato dhan walba.maxaayeelay fursado maha joogto waa wax kusoo mara,adoo taa maanka ku haya,waxaad daacad u noqotaa dalkaaga labaad ee aad ku dhex heshay fursadaan ugu horayn,ilaali sharcigiisa iyo maslaxada dalkaas kuna biiri fikirkasta oo dan u ah dalka iyo dadka maraykanka.
Waxaa sidoo kale ku saaran xuquuq ah in aadan iloobin wadankaagii hooyo,oo aad galaan gal badan ugali karayso intaad awoodo sidii uu tubtuu maanta haleelay ee dawladnimo uga miro dhalin lahaa,si dadkaaga iyo dalkaagu u helaan nolol xurmo leh koonka korkiisa. Ninwalbaa waa og yahay in arimahaagu xadadan yihiin taasoo aad la qabto dad badan oo siyaasada kugula jira hayeeshee xad malaha doonida iyo dadaalka qofku wuuna gaara ugu danbayn arimihiisaa marka rabi uu talo saarto dadaalana. waxaan kusaaran ismiisaamid iyo xasilooni ah intaad karto u faa iidayn labadaada dal iyo labadaada shacaba, hadalkuba waa hiilo ee xasuusnoow arinkaa intaad fursada maanta haysato.
waan kuu mahad celinayaa dadaalkaaga mar iyo labo intaba.waxaan u rajaynayaa dibad ku noolka soomaaliyeed in ay ka muuqdaan oo sharaf ku dhex yeeshaan dalaka ay ku noolyihiin kana faa iidaystaan fursadaha yaala oo dadka wax la qaybsadaan isna kaalmaystaan isku duubni soomaalinimo. waxaa kaloon umada soomaaliyeed kula dardaarmi lahaa dalkeena in aan caymino wax walba oo kale meel iska dhigno oo shuruud la aan aan garab istaagno dawladnimadeena. suuro gal maha in aan dawladnimadii kahornimaadno oo diidno hadana ka calaacalo ETHIOPIA iyo shisheeyaa i qabsanaaya! adoo diidan dawladnimadii aad isaga celin lahayd shisheeyaha!!!
Nusqarni kabacdi waa damiir xumo iyo masuuliyad daro in aan sii ahaano dad dalkoodii ka dhisan waayay dawlad hanata,oo wali usii kala qaybsan wax dunidaba laga gudbay oo ah qabiil qabiil iyo calooshii la cayaar. soomaalidu maha in ay u sii sacabo tumaan ama isha ka dhawrtaan kuwa aan ehelka u ahayn dalkaan dawladnimadiisa ee dhaqan ka yeeshay dumin,dhiig islaam daadintii iyo colaad aan macno lahayn wax laga faa iidayna aysan jirin ilaa hada khasaaro mooyee.
Waxaan u rajaynayaa ilhaan omar khayr labada daaroodba ah iyo in ay noqoto haweenaydii u horaysay ee madaxweyne ka noqota america.waxaan aad u aamin sanahay una filayaa in ay ilhaan halkaa gaari karto markaan arkay ragnimadeeda. fiiro gaara dad aqoon yar ayaa laga yaabaa in aysan fahan sanayn macnaha markaan leeyahay raganimada ilhaan,waayo macnaha “Raganimo” maha uun mid ragu leeyahay ee waa darajo sare oo la gaaro,imisa raga ayaan dunida lahayn raganimo? raganimada looma jeedo lab wax dhali kara sida dad ka qaarkii u haystaan sidaa maha macnuhu. dumarka iyo raguba way u siman yihiin raganimada oo waa darajo la gaaro oo sare,nin iyo naagba ama rag iyo dumarba kii illaahay gaarsiiyo ayaa gaara raganimadaas.
markaa waa arin loo wada siman yahay ee maha uun mid raga ku kooban sida caamadu u haysato.waa martabo lagaaro.hada ilhaan omar martabadaa ayay gaartay oo leedahay wayna guulaysan idamka illaahay markale.